i-PIVX ime njani kwiindawo ezingasese | PIVX
i-PIVX ime njani kwiindawo ezingasese
Abantu abaninzi baye bacele umfanekiso olulula we-PIVX. Esi sithuba siya kuba sesinye sezimbalwa ukuze sikunikeze umboniso we-PIVX kwaye sibonise iimpawu ezininzi kunye ne-blockchain / ezihambisa iinkqubo zeteknoloji zesikhokelo kunye nendlela ekuthelekiswa ngayo nezinye i-cryptocurrencies namhlanje. Ngokukodwa, eli thumela liza kugxininisa i-cryptos emithathu ephezulu eyimfihlo yokuzimela ngasese ukuba zonke iindlela zabo azikuthi ziqhubele phambili ukhuseleko kunye nobumfihlo bentsebenziswano kwi-cryptocurrencies, kodwa ukuphuhlisa izilwanyana kunye nezisombululo ezizodwa kunye nabasebenzisi bayo.
Makhe sibheke kwimbali esheshayo ye-technology ye-blockchain (kuqala ngeBitcoin kuqala) ngaphambi kokuba sijonge ezi zintathu zemali ezijoliswe ngasese ukucacisa ukuba kutheni izinto ezizimeleyo (kunye ne-blockchain), kunye nokuba yintoni umahluko phakathi kwezi projekthi ezintathu.
Imbali emfutshane yeBitcoin
I-Bitcoin yayiyimodeli yokutshintshiselwa kwe-blockchain ngenjongo okanye ekutshintshiseni / isitoreji sexabiso ngokuthe ngqo phakathi koontanga olwenziwe nguSatanoshi Nakamoto kunye nezi zinto zilandelayo:
· Ngokuqulunqwa kobubungqina be-cryptographic yomsebenzi koku’miner’,i-bitcoin yindlela efanelekileyo, kunokuba ityala kunye netyala.
· Njengombutho woluntu, kuqinisekiswa kwaye kufinyeleleke kuwo wonke umsebenzisi, ngokubhekisele kwi-coding, promotion, exchange, kunye nezinye iifom zokusetyenziswa.
· I-Bitcoin ayifuni ukusetyenziswa kwe-escrow okanye umntu othembekileyo phakathi
· I-Bitcoin inikeza ukusebenza kwezivumelwano ezilula.
· Njengemali ye-intanethi, i-bitcoin isebenza kumazwe ngamazwe
Imida kunye neengxaki zeBitcoin
Enye yeengcamango ezingalunganga malunga neBitcoin kukuba yi-“yangasese” kwaye ezo ntengiso zafihliwe ngokupheleleyo. Enyanisweni, sele ibonakaliswe ngamacandelo ahlukeneyo ukuba idatha egcinwe kwi-Bitcoin ye-block-chain, edibaniswe nencoko yekhredithi, inokudibaniswa nedatha eyongezelelweyo ye-intanethi, idibanisa iqhosha lekhredithi kumnini wayo, ukulandelelanisa konke okuthengayo.
Ubumfihlo kunye neBlockchain
Ekubeni kwe-bitcoin, ezinye iindlela ezikhethiweyo zenziwe zikopishwe kwi-bitcoin. Nangona kunjalo, iiprojekti ezimbalwa ze-cryptocurrency ziye zazama ukubonelela izixazululo ezibonakalayo xa kuziwa ngasese. Ngoba? Kukho izizathu ezininzi, enye yazo i-blockchain iteknoloji, ngokubanzi, yenzelwe ukuba yonke intsebenzo ibonakale kwi-blockchain, kwaye kunye noko, ukunikezelwa kwemali ngaloo ndlela kunokuqinisekiswa ngumntu. Ngaloo ndlela, i-blockchain zobungasese buchule kufuneka basebenze ngokubambisana nokugcina ukuqinisekiswa koluntu kweemali kwaye ngoko ke ixabiso lemali elinikeziweyo kwakhona.
Sakhetha ukugqamisa i-PIVX, i-Monero, ne-Zcoin-Iiprogram ezintathu ze-cryptocurrency ezibonelele ngeendlela ezingabonakaliyo ze-blockchain zorhulumente kwaye ziye zahlolwa ukuba zibonelele ubumfihlo kubasebenzisi bayo. Zonke ezi zintathu zineenkalo zabo ezikhethekileyo kunye nokwandisa ngaphaya kobugcisa bebucala. Khangela ingqalelo kwiteksi engezantsi ukwenzela uhlangothi olukhawulezayo ngokuthelekiswa koxinzelelo kwezo zinto zobumfihlo kunye nokunye. Ezinye iimali kunye neeprojekthi ziya kufaniswa nakwixesha elizayo, kuquka i-ZCash, i-DASH, kunye nekhadi lokubambisana ne-PIVX kunye ne-Bitcoin, i-Litecoin, ne-Ethereum.